Myths | Myanmar Gazette News Media Forum Network - Page 5
Posts Tagged "Myths"	11
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IX
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VIII
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VII
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VI
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths V
Page5of 6«<...23456>
Comments By Postကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - Ma Ei - ၀င့်ပြုံးမြင့်ဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ် - Thint Aye Yeikစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၂)-NEO-CLASSICISM တွေ ထွက်ခဲ့ဟေ့ - Thint Aye Yeik - ၀င့်ပြုံးမြင့်ကဗျာလေး မူးနေပြီ - ၀င့်ပြုံးမြင့် - ၀င့်ပြုံးမြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - ၀င့်ပြုံးမြင့် - Thint Aye Yeikဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့် ၂၁ရာစု၏တိုးတက်လာသော အသုံးဝင်နည်းပညာများ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye YeikPromotion လေးတွေလာပါပြီ............................... - Thint Aye Yeikလေကြောင်းခရီးသွားသည့်အခါ တစ်ကိုယ်ရေးသုံး Liquid-Gel-Spray ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုသယ်ဆောင်သွားမလဲ ? ? ? - Thint Aye Yeikအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Thint Aye Yeikပြည်ပခရီးသွားများ၏မျက်စိကျ လည်ပတ်ဖွယ်ဖြစ်လာသည့် မြန်မာ - Thint Aye Yeikအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Thint Aye Yeikသူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်ခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပိုးနိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် အချက် (၁၅) ချက် - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်ဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၈ ဦး - Thint Aye Yeik - kaiချိုသာခွန်းဆက်, နှုတ်ဆက်ကြလျှင် - manawphyulay - aye.kkယာဉ်အို စက်ဟောင်း ထိန်းမောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် - kai - manawphyulayဘီယာသောက်တဲ့ ပုဇွန် - manawphyulay - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်"ေ ကာက်ရိုးမီး" - Thint Aye Yeik​မွေး​နေ့ဆိုတာ - manawphyulay - Thint Aye Yeikကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - etone - သျှားသက်မာန်အဝင်ကော - ko six - Thint Aye YeikMarijuana - ဆေးခြောက် - Thint Aye Yeik - kaiအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - kai - kaiကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - Thint Aye Yeik၀မ်း ဗိုက် ပြားချက်နေဖို့ မနက်ခင်း တိုင်းစားပေးသင့်တဲ့ အရာ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikထူးမြတ်သောသွေးလှူခြင်း - aye.kk - etoneမြသပိတ်ရေပြာအိုင် - သျှားသက်မာန် - Ma Eiဖွင့်မရတဲ့ ဦးနှောက် - ဂျစ်စူ - Thint Aye Yeik" အငုံ့စိတ် " - ဂျစ်စူ - Thint Aye Yeikအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - ဂျစ်စူနာဂတောင်တန်းတွေဆီက ပျံ့လွင့်လာတဲ့တေးသွားများနဲ့နှစ်ကူးပွဲတော် - သျှားသက်မာန် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်ချစ်ခြင်းပုံပြင် နိဒါန်း - sorrow - CrystallineThe Sense of Traveling - sorrow - sorrowဖွဲတစ်ဆုပ်... - sorrow - ဦးကျောက်ခဲခရီးသွားခြင်းကသင်ပေးသည့်အရာများ ******************************************* - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik"ပြည့် " - aye.kkစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၁)- မျှစ်ကြော်ရဲ့လက်သီးချက်ကို မြည်းစမ်းခြင်း - Thint Aye Yeik - ဇီဇီCategory	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10alinsett (95578 Kyats )Anzartone (95532 Kyats )kyeemite (91703 Kyats )weiwei (83114 Kyats )SP (80986 Kyats )padonmar (76894 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59014 Kyats )monmon (58579 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB